China Vibrator miaraka amina orinasa mpamokatra VV170A minono sy vibrator | ANDREFANA
Vibrator miaraka amnono sy vibrator, firaisana ara-nofo inona no tsara kokoa noho io?
Size: 125 * 49mm
Function: minono 7-mode ary 10-mode vibrate
• Silipo marefo amin'ny sakafo ara-tsakafo toy ny hoditra miaraka amina endrika feno endrika 100% tsy mahazaka rano.
• lohany G-spot amin'ny orgasme tsy mampino.
• 42 ° C mari-pana tsy miovaova toy ny fanandramana tena firaisana.
Teo aloha: Vibrator G-spot mahazatra, endrika tsotra miaraka amin'ny orgasme VV062C tsy azo ovaina
Manaraka: Vibrator miaraka amin'ny fanamainana VV171A
Mpanafika lehilahy maoderina sy matevina miaraka amina modely 10 ...